Nisha Sharma 819 days ago
mulajasto 819 days ago
Sajha keto 819 days ago
Nas 819 days ago
luccefer 819 days ago
dhoti_prasad 819 days ago
sidaNepali 819 days ago
teroobaau 819 days ago
Nas 818 days ago
luccefer 818 days ago
funtush 818 days ago
Nas 817 days ago
luccefer 817 days ago
Nisha Sharma 816 days ago
Sajha keto 816 days ago
Nas 816 days ago
Visitor from RU is reading rato
[VIEWED 23576 TIMES]
Posted on 08-14-17 6:31 PM [Snapshot: 1236] Reply [Subscribe]
मुला ब्रोले त् जहिले नि मिठो शब्द बोलिदिन हुन्छ ...अनि छ नि निशा नानु ... यी मेरा बम्फुसे साझा केटो ब्रोको हावा कुरा चैँ न्सुन्नुस ल !
अनि हजुरले ब्याचलर कति सेमेस्टर गर्न भाको ? येदि धेरै नै सेमेस्टर गरि आउनु भाको भए, हजुरले आफ्नो ट्रांस्क्रिप्त पहिला शुरु इभय्लुएत गर्नुस ! यो साइटले हजुरलाई हेल्प गर्नेछ ल ! येस्मा हेर्नुस कुन कुन दकिउमेन्ट पठाउने भनेर ल !
येदि एक-दुइ सेमेस्टर मात्र नेपालमा लिन भाको भए चै शायेद फ्रेश्मेंन देखि नै येताई पढ्न भाको राम्रो होला जस्तो मलाइ लाग्छ !
येदि हजुरको फाइनानसियेअल अवस्था ठिक छ भने त् इउनिभर्सिति नै पढेको ठिक हुन्छ, नत्र कमिउनिति कलेज पदधा अलिक सस्तो नि हुन्छ ! मेरो बिचारमा कमिउनिति कलेजबात् एसोसिएट डिग्री लिएर पछि ब्याचलर्स गर्दा नि हुन्छ ! प्लस स्टेट कलेजमा फ़ैनेन्सिएल एडहरु नि पाउन सकिन्छ है !
सेन्ट लुइसमा भाको कलेजहरुको लिस्ट यहा छ ल !
अनि हजुरले नेपालमा के बिसय पध्धै हुनुहुन्थ्यो ? खासै दुइ बर्ष सम्म त् खाली लिबरल आर्ट्स क्लास लिने हो .. अनि पछि आफ्नो ट्रयाकको बिसयहरु लिने हो, येदि हजुर अँन दिसाइदेद हुनु हुन्छ भने ल ! येदि अहिले नै के पढ्ने भनेर सोच्न सक्न भाको छैन भने, केहि सेमेस्टर जेनरल क्लासहरु लिनुस ! अनि पछि कलेज जान थाले पछि बिस्तारै आफ्नो इन्ट्रेस्ट के मा हुन्छ, त्यो डिस्कभर हुँदै जान्छ नि ! नेपालमा जस्तो होइन नि यहा .... कि साइन्स, कि कमर्स कि आर्ट्स लिन पर्ने ...
तर निशाजी... जसरि भएनि हजुरले आफ्नो ब्याचलर्स डिग्री हासिल गरि छाड्नुस ल ! यहा नपढ्नेले कि धनि केटो खोजेर बिहे गर्न पर्छ कि तेही मिनिमम वेज वाला काम गरेर ढाड भचाउन पर्छ ... या त आफ्नै बिजनेस शुरु गर्न पर्छ ! मेरी एउटी पेरुकि साथि थि .... मसंगै म्यन्हाटन मलको म्याक दनाल्डमा काम गर्थी ! उनलाई राम्रो इन्ग्लिश पनि बोल्न औन्दैन थि ! मैले कति इन्ग्लिशमा हेल्प गर्थे काममा ! पछि उनि इन्गिश क्लास गइन ! अनि पछि कमिउनिति कलेज र फ़ैनल्लि हार्ड वर्क गरि कलेजको डिग्री नि लियिन ! अहिले उनले राम्रो जब गर्छिन ! यहाँ आँटन मात्र पर्छ, जे पनि सम्भब छ नानु !
हजुरको सफलताको लागि सधै कमान गरि रहनेछु ल !
Posted on 08-15-17 6:17 PM [Snapshot: 1881] Reply [Subscribe]
"भाग्य चम्केको हेर त नाश को"
"नास ब्रो को भाग्य पनि उज्योलो भए"
माथिको....पढेर रातो पिरो भए नि हौ .....तर त्यहा साइनो गाँस्न भैसक्यो क्या मेरी प्यारी निशाजीले .... तेसैले ब्रोहरु अबो देखि मेरो सुपाडी नफुटाउनुस न ल मेरी निशाजीको आगाडी !
लुसीफर ब्रो ..... ब्रोको धागो शायेद पढ्न मिस भए छ होला .... सबै धागो खोलि हेरी पढ्नलाइ फुर्सद नै हुँदैन हौ ... सरि ल ब्रो !
धोति ब्रो .... बिचरी निशाजीलाइ आइ. टिको बारे तेती थाहा हुनु हुन्न रे ... डट नेटको त्रेनिंग दिन त् अलिक सारै पर्छ होला अहिलेको लागि ! तर अलिक ब्याक ग्राउण्ड भाकाहरुलाइ चैँ मैले धेरै समय दिएर मदत गरि राको छु ! येही साझाका भेटेका एक जना ब्रो नि हुनुहुन्छ !
"bahini ta priyanka karki..bhanda pani ramro rahichin..amby ji ko coffee selaunay bhayo"
हो निशा नानु सार्है कीउट हुनु हुन्छे सिदा नेपाली ब्रो ... मेरी प्यारी प्रियाँकाजी जस्तै ! मलाई त् अलिक सन्नी जस्तै लागेको ! अनि छ नि ... मेरी प्यारी एम्बीजीसंगको कफी डेट एक दम दुरुस्त छ ब्रो ! आइ एम सो लुकिंग फरवार्ड टू इट ! म सार्है बेसब्रसंग इन्तजार गरि राको छु तेस दिन को लागि ! जीवनमा मेरी प्यारी एम्बीजीसंग जसरि नि भेट्ने कसम खाको छु !
"he must be paid by admin if he is not"
साँची नै हो ल ... हनुमान ब्रो ! अस्ति पनि आर्को ब्रोले तेस्तै भन्दै हुनु हुन्थ्यो ! मैले साझामा जति टाइम बिताउञ्छु, इउतिउबमा तेसरी नै भ्लगिंग गरेको भए अहिले सम्म त् थुप्रै पैसा कमाइसक्थे होला ! तर पनि मेरो साझामा भतुवा लाग्ने बानिको कदर साझाले नगर्न भाको पनि होइन ! मलाई साझाले दुइटा "टि" पठाउनु भाको थियो नि ! जे होस् साझामा मेरो खातेगिरी व्यर्थमा गाको चैँ छैन जस्तो लाग्यो तेस्पछि चैँ !
Posted on 08-16-17 6:56 PM [Snapshot: 2263] Reply [Subscribe]
लुसीफर ब्रो, म यता इस्टकोस्ट तिर हो अहिले ! तर मेरो पोर्ट अफ एंत्री चैँ सेन्ट लुइसमा थियो ! म आउँदा मेरो मम त्यहा हुनु हुन्थ्यो २००० मा ! २ हफ्ता बसेको मरे म त् गर्मि लागेर ! अनि फेरी नेलीले तेती बेला हिट एल्बम निकालेकोले, देश भरि सेन्ट लुइसको चर्चा भैराको थियो !
म संगै निउ योर्कमा हुर्केको साथी चैँ कन्सल्टिंगको सिलसिलामा ५ बर्ष अगाडी सेन्ट लुइस पुगेको थियो र अहिले उतै सेटल भो ! अनि उनले नै ह्याँडी क्राफ्ट स्टोर खोलेको छ डाउन टाउनमा !
फंतुश ब्रो, मेरो बिचारमा मलाइ चैँ साझाको खाते #१ भाकोले पुरुस्कृत भाको जस्तो लागेको छ ! तर ब्रोले साझालाइ टि-शर्ट माग्न भो भने पठाई दिन हुन् हुन्छ होला ! एक खेप ट्राइ मार्नुस है !
अनि निशा नानु ... हजुरले केहि डिसिजन लिन भयो कलेज बारे ? प्लिज मलाइ अपडेट गर्दै गर्नुस ल नानु !
Last edited: 16-Aug-17 08:49 PM
Posted on 08-16-17 8:28 PM [Snapshot: 2330] Reply [Subscribe]
लुसिफ़र ब्रो .... बेस्ट त् मास्टर्स गर्नको लागि हो आउने ! ब्याचलर्स गर्न आउँने हो भने चैँ ... हजुरबुबाको पनि हजुरबुबाको बिहे हेर्न भए आउनुस ! कस्सम होला .... खाते कुक्कुरले नपाको दुखः पाइन्छ स्टुडेन्ट लाइफमा ! झन् अमेरिकामा कोइ नचिनेको भए त् सार्है गारो हुन्छ ! धेरै स्टुडेन्टहरुले आफ्नो स्त्यतास तेही भएर लस्ट गरेका छन् यहा ! ब्याचलर्स लाइफमा त् पढाइ भन्दा नि अब आर्को सेमेस्टरको पैसा कसरि तिर्ने, डेराको रेन्ट, खान बस्न ... पैसाको समस्या नै समस्या ! म त् तेही भएर नियोर्कको कमिउनिति कलेज गाको नि ... दुइ बर्ष त् ! अनि दिन भरि घण्टा हान्यो ...राति स्कुल गयो ... थाकेर चुर हुन्थ्यो ... निन्द्रा झ्याप झ्याप लागेर कति हैरान हुन्थ्यो ! धत् ... यहा बिद्यार्थीहरुले कति दुखः कस्ट गर्न पर्छ भने ! साला .... म आउँदा ज्याक्सन हाइत्समा ... हाङ्ग मि भन्ने कोरियेंन बुढोको इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सी थियो ! बल्ल बल्ल मिनिमम वेज भन्दा नि कम $५.०० प्रति घण्टाको काम, एउटी कोरियेंन बुढीको स्टोरमा लगाइदेको थियो ! फर्स्ट दिन काममा गाको ... ल स्टोर बधाल भनेर ... ब्रुम स्टिक देको ... नेपालमा आफ्नो कोठामा धरी झाडु न्बरालने ले ....ब्रुम स्टिक नि कहा नेपालको जस्तो झाडु र ... स्टोर बरालेको भोलि पल्ट देखि एक हफ्ता सम्म हात चलाउन गारो भाको ! अनि त् नेपालमा बाउ आमालाइ पेलि खाएको पाप त् सबै निस्क्यो नि अमेरिकामा ! एक महिना पछि मैले त्यो काम छाडी ... अनि म्यान्हातनको मलमा म्याक दनाल्डमा आर्को काम पाको !
तर ब्रोलाइ मैले हतोसहित गर्न खोजेको चैँ होइन है लुसिफ़र ब्रो ! साँची नै सारै गारो छ बिद्यार्थी लाइफ ... एक ताका कलेजमा साथिले पैसा तिर्न नसकेर सब साथीलाइ सापटी मागी हिंडेको ...बिचरालाइ मैले ५० दल्लर मात्र दिन सकेको कुरा लिएर अहिले पनि मलाइ र्याग लाग्छ ...तेस्तो सारो परेको बेला हेल्प गर्न सकिन भनेर !
आउने भए त् ठुलो सहर तिरै आउने हो ब्रो ! काम पाउन अलिक सजिलो हुन्छ अरु सानो तिनो सहर भन्दा ! तर येदि अमेरिकामा सपोर्ट छैन भने चैँ, घटीमा दुइ-तिन सेम्स्तरलाइ हुने गरि पैसा चैँ जम्मा गरि राख्नु है ! पहिलाको जस्तो अहिले कहा छ र ट्रंप बाबाको जमानामा ! भनेको बेला काम पाइन्दैन ! एक सेमेस्टरको मात्र पैसा छ भने चैँ ... अलिक सोचेर मात्र आउनु है ! काम पाएँन भने त् फेरी स्त्यतास जान सकिन्छ ! स्त्यतास गयो भने त् अमेरिकी केटिसंग बिहे गर्न बाहेक, अरु केहि छैन अब चैँ !
मेरा यी कुरालाइ मनमा राखी आउनुस है ब्रो ! ब्रोको सफलताको लागि म कमान गर्दछु ! अनि खबर गर्दै गर्नु ल मलाइ !
Posted on 08-17-17 6:05 PM [Snapshot: 2595] Reply [Subscribe]
उता मेरी प्यारी राधिजीले पटेल ब्रदर्स पाउन भाको...... एता मेरी फुच्चीले जब पाउन भाको ..... आइ एम सो ह्यापी एण्ड प्राउड अफ इउ माइ बेबी बू ! हजुरलाई धेरै नै शुभकामना छ है ! हजुरको अब त् बिजी हुने दिन आयो ! तर पनि कहिले काँही "हाइ" भन्न आउनुस ल .... फुर्सद लिएर !